‘इमेल’ थोरै पठाउँदा वातावरण जोगिन्छ ! कसरी ? « Sudoor Aaja
९ मंसिर २०७७, मंगलवार ०८:२४
‘इमेल’ थोरै पठाउँदा वातावरण जोगिन्छ ! कसरी ?
सुदूर आज ९ मंसिर २०७७, मंगलवार ०८:२४
बीबीसी । यदि तपाईँको आवश्यकता भन्दा बढी नै इमेल प्रयोग गर्ने बानी छ भने त्यो वातावरणका लागि हानिकारक हुन सक्ने पर्यावरणविद्हरुले बताएका छन् । पृथ्वीलाई जोगाउने सम्बन्धी विभिन्न नयाँ उपायको खोज गरिरहेका वैज्ञानिकहरुले त्यसो भनेका हुन् ।
कतिपय मानिसहरुमा विशेषगरी काम भइसकेपछि इमेलबाट नै ‘थ्यांक क्यु’ भनेर एक लाइनको म्यासेज पठाउने बानी हुन्छ जुन वातावरणका लागि उचित नभएको उनीहरु बताउँछन् । ‘द फाइनान्सीयल टाइम्स’ ले गरेको रिपोर्ट अनुसार अब छिट्टै विश्वभर सबै मानिसहरुलाई दिनमा एउटा भए पनि थोरै इमेल पठाउन अनुरोध गर्ने समय आउन सक्नेछ ।
किनकि त्यति गर्नुले पनि धेरै ठूलो स्तरमा कार्बन उत्सर्जन हुनबाट जोगाउन सक्ने कोप २६ जलवायु सम्मेलनका अधिकारी बताउँछन् । एउटा इमेलले कसरी त्यति ठूलो फरक पार्न सक्छ होला भन्ने धेरैलाई थाहा नहुनुले पनि यो विषय गम्भीर बन्दै गएको छ ।
त्यस्तै अर्को उदाहरण दिँदा, १ वर्षमा विश्वभरमा पठाइने ६२० खर्ब ‘स्पाम म्यासेज’ सबै डिलिट गर्ने हो भने यसले २ करोड टन कार्बन–डाइअक्साइड ग्यासलाई हाम्रो वातावरणमा उत्सर्जन हुनबाट जोगाउनेछ । यसकारण पनि आवश्यक इमेल मात्र पठाउने अनि अनावश्यक र स्पाम म्यासेजहरु सधैँ डिलिट गर्ने बानी गर्दा राम्रो हुनेछ ।
हाम्रो एउटा सानो प्रयासले पनि वातावरण जोगाउनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने वातावरण विद्हरु बताउँछन् । तर यसमा इमेलले कति कार्बन उत्पन्न गर्छ भन्ने तथ्याङ्क निकाल्न सानोदेखि ठूलो स्रोतसम्मलाई गणना गरिएको छ । जस्तै सर्भरहरुले प्रयोग गर्ने ऊर्जादेखि, हाम्रो वाइफाइ, हाम्रो ल्यापटप, डाटा सेन्टरका भवन बनाउँदा उत्पादन भएको कार्बनलगायत सबैलाई आधार मानिएको छ ।